Ọ Kwụsịrị Ịgha Ụgha na Ịgba Chaa Chaa Ma Fewe Chineke Na-eme Ebere Ma Na-agbaghara Mmehie
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Alur American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Aymara Batak (Toba) Bengali Bicol Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chokwe Cibemba Cinyanja Croatian Czech Danish Dutch Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French French Sign Language Ga Georgian German German Sign Language Greek Greenlandic Guarani Gujarati Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Japanese Sign Language Kabuverdianu Kannada Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Krio Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Low German Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Marathi Maya Mexican Sign Language Moore Myanmar Nahuatl (Central) Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (European) Punjabi Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Romanian Russian Russian Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Venda Vietnamese Wolaita Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
Ọ Bịara Doo M Anya na Jehova Na-eme Ebere Ma Na-agbaghara Mmehie
Akụkọ Normand Pelletier kọrọ
A MỤRỤ M N’AFỌ: 1954
ABỤ M ONYE: KANADA
NDỤ M BIRI: ANA M EGWUBU WAYO, NA-AGBAKWA CHAA CHAA
Etoro m n’obodo Mọntrịyọl. Ọtụtụ ndị nọ ná mpaghara m bi n’obodo a anaghị enwe obi ụtọ. Papa m nwụrụ mgbe m dị ọnwa isii. Ọ bụ mụnwa bụ nke ikpeazụ n’ime ụmụ asatọ papa m na mama m mụrụ. Ọnwụ papa m meziri ka ọ bụrụ mama m na-egboro anyị mkpa anyị niile.
Mgbe m na-etolite, ihe e ji mara m bụ ịṅụ ọgwụ ike, ịgba chaa chaa, ịlụ ọgụ, na iso ndị ohi na-akpa. Mgbe m dị afọ iri, m bidoro ịgara ndị akwụna na ndị omempụ na-agbazinye ndị mmadụ ego ozi. M na-aghakarị ụgha, ọ na-atọkwa m ụtọ ịghọgbu ndị mmadụ. Ihe ndị a m na-eme riri m ahụ́ ka onye ọgwụ ọjọọ riri ahụ́.
Mgbe m na-erula afọ iri na anọ, abụzi m aka ochie n’ịmata otú m ga-esi na-aghọgbu ndị mmadụ. Dị ka ihe atụ, m na-azụ ọtụtụ elekere a na-agba n’aka, ọla aka, na iyeri ntị e ji ọlaedo machie elu ha. M na-abịazi were ihe e ji ede aha n’ọla dee na ọ bụ ọlaedo ka e ji mee ihe ndị ahụ. M na-eburuzi ha gaa ree n’okporo ámá nakwa n’ime ahịa. Otú ego si abata m aka mgbe ahụ na-atọ m ezigbo ụtọ. O nwedịrị otu ụbọchị m rechara ahịa rite puku dọla iri n’uru (ya bụ, ihe dị ka ₦1,580,600).
E mechara kpọga m n’ebe a na-enyere ụmụaka na-eme mpụ aka. Ma, mgbe m dị afọ iri na ise, a chụpụrụ m n’ebe ahụ, o nweghịzi ebe m nwere m ga-ebi. M na-ehizi n’okporo ámá, n’ebe a na-adọsa ụgbọala, na n’ụlọ ndị enyi m.
Ndị uwe ojii na-anwụchikarị m mgbe ọ bụla maka igwu ndị mmadụ wayo. Ma, o nweghị mgbe a tụrụ m mkpọrọ n’ihi na ihe ndị ahụ m na-ere abụghị ihe ndị m zuru ezu. Ma ọtụtụ oge, m kwụrụ nnukwute ụgwọ maka wayo m gwuru, na maka iduhie ndị mmadụ, nakwa maka ire ahịa n’anataghị ikike. M na-agachadị anatara ndị omempụ na-agbazinye ndị mmadụ ego ego e ji ha n’ụgwọ. Ihe a m na-eme nwere ike ịta isi m. Ma, o nweghị onye m na-atụ ụjọ. M na-ejikwa égbè mgbe ụfọdụ. O nwekwara oge ụfọdụ m na-eso ndị omempụ aga akpa arụ.
Mgbe mbụ m nụrụ gbasara Baịbụl bụ mgbe m dị afọ iri na asaa. Mụ na otu enyi m nwaanyị bi mgbe ahụ. Ya na Ndịàmà Jehova malitere ịmụ Baịbụl. Ma, obi adịghị mụ mma na o nwere omume ndị Baịbụl kwuru na ha adịghị mma. N’ihi ya, m hapụrụ enyi m nwaanyị a gakwuru nwaanyị ọzọ mụ na ya na-akpa.
Ma, enyi m nwaanyị nke abụọ a bidokwara soro Ndịàmà Jehova mụwa Baịbụl. Ọtụtụ ihe gbanwere ná ndụ ya. Ọ bịara na-adịkwu nwayọọ, na-enwekwukwa ndidi. Ihe a niile tọrọ m ụtọ, mụ agbanwee obi m. Otu ụbọchị, ekwetara m gaa ọmụmụ ihe n’Ụlọ Nzukọ Alaeze Ndịàmà Jehova. Mgbe m rutere, ha nabatara m nke ọma. Ha niile jiri ejiji dị mma. Ha dị nnọọ iche ná ndị mụ na ha na-akpabu. Ndị ezinụlọ m egositụbeghị m na ha hụrụ m n’anya, e nweghịkwa onye gosiri m na ya hụrụ m n’anya n’oge niile m bụ nwata. Otú Ndịàmà Jehova si gosi m na ha hụrụ m n’anya bụ ihe na-agụ m agụụ kemgbe. Mgbe Ndịàmà Jehova gwara m ka mụ na ha mụwa Baịbụl, m kwetara ozugbo.
Ihe ndị m na-amụta na Baịbụl zọrọ mụ ndụ. Mụ na ndị enyi m nwoke abụọ na-akpabu nkata ịga ohi iji nweta ego m ga-eji akwụ ụgwọ m ji ndị mụ na ha gbakọrọ chaa chaa. M ji ha ihe karịrị puku dọla iri ise (ya bụ, ihe dị ka ₦7,875,500). Ma, obi dị m ụtọ na esoghịzi m ha gaa ohi ahụ. Ha abụọ gawaziri naanị ha. Ndị uwe ojii jidere otu n’ime ha ma gbagbuo onye nke ọzọ.
Ka mụ na Ndịàmà Jehova na-amụ Baịbụl, m bịara mata na e nwere ọtụtụ omume ọjọọ m na-eme m kwesịrị ịkwụsị. Dị ka ihe atụ, 1 Ndị Kọrịnt 6:10 kwuru, sị: “Ndị ohi, ma ọ bụ ndị anyaukwu, ma ọ bụ ndị aṅụrụma, ma ọ bụ ndị na-ekwujọ mmadụ, ma ọ bụ ndị na-apụnara mmadụ ihe, agaghị eketa alaeze Chineke.” Mgbe m gụrụ amaokwu Baịbụl a, anya mmiri gbawara m n’ihi na ọ bụ ihe ndị ahụ ka m na-eme. Ọ bịara doo m anya na m kwesịrị ịgbanwe ndụ m kpamkpam. (Ndị Rom 12:2) Ana m eme ihe ike, na-ewe iwe ọkụ, ụgha anaghịkwa akọ m ụkọ n’ọnụ.
Ma, amụtakwara m na Jehova dị obi ebere, na-agbagharakwa mmehie. (Aịzaya 1:18) Ekpesiri m ekpere ike na-arịọ Jehova ka o nyere m aka ka m hapụ ndụ ọjọọ ahụ m na-ebi. Jehova nyeere m aka mụ ejiri nwayọọ nwayọọ kwụsị ihe ọjọọ ndị ahụ m na-eme. Otu ihe gbara ọkpụrụkpụ m mere bụ ịlụ enyi m nwaanyị ahụ otú iwu kwuru.
Ọ bụ n’ihi na m mụrụ Baịbụl, meekwa ihe ndị m mụtara mere m ka ji dịrị ndụ taa
Adị m afọ iri abụọ na anọ mgbe ahụ, anyị jikwa ụmụ atọ. Ihe bụ́zi mkpa m ugbu a bụ ịchọta ezigbo ọrụ m ga na-arụ. Ma, agachaghị m akwụkwọ, o nweghịkwa ụlọ ọrụ nyerela m akwụkwọ m nwere ike iji nweta ọrụ. Mgbe m rịọsichara Jehova arịrịọ ike ka o nyere m aka, m gawaziri ịchọ ọrụ. M gwara ndị nwere ike iwe m n’ọrụ na m chọrọ ịgbanwe ndụ m ma bido rụwa ezigbo ọrụ. Mgbe ụfọdụ, m na-akọwara ha na m na-amụ Baịbụl, nakwa na m chọrọ ịbụ ezigbo mmadụ ga na-abara obodo uru. Ọtụtụ ndị ekweghị ewe m n’ọrụ. Ma n’ikpeazụ, enwetara m onye were m n’ọrụ. Mgbe m kọchaara ya ụwa m, o kwuru, sị: “Obi m na-agwa m wee gị n’ọrụ, ma amaghị m ihe mere o ji na-agwa m wee gị.” Ọ bịara doo m anya na Jehova azala ekpere m. Mụ na nwunye m mechara mee baptizim ma ghọọ Ndịàmà Jehova.
URU NDỊ M RITERE:
Ọ bụ n’ihi na m mụrụ Baịbụl, meekwa ihe ndị m mụtara mere m ka ji dịrị ndụ taa. Mụ na ezinụlọ m bụzi ndị e ji ama atụ. Obi na-eruzi m ala ugbu a, n’ihi na m ma na Jehova agbagharala m.
Kemgbe afọ iri na anọ gara aga, m na-ekwusa ozi ọma oge niile, na-enyere ndị mmadụ aka ịmụta Baịbụl. Na nso nso a, nwunye m amalitekwala ịna-ekwusa ozi ọma oge niile. Kemgbe af iri atọ ugbu a, enyerela m mmadụ iri abụọ na abụọ mụ na ha na-arụ ọrụ aka ha ebido fewe Jehova. M ka na-aga n’ebe a na-ere ahịa, ma ọ bụghịzi ịga gwuo ndị mmadụ wayo, kama ọ bụ ịga kọọrọ ha ihe ndị m mụtarala na Baịbụl. M na-akọrọ ha banyere ụwa ọhụrụ nke ndị aghụghọ na-agaghị anọ na ya.—Abụ Ọma 37:10, 11.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Ọ Bịara Doo M Anya na Jehova Na-eme Ebere Ma Na-agbaghara Mmehie
Ụdị Dị Iche Iche Họrọ ụdị nke ị ga-ewere ỤLỌ NCHE Ọgwụgwụ Ụwa Ọ̀ Dịla Nso?
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ ỤLỌ NCHE Ọgwụgwụ Ụwa Ọ̀ Dịla Nso?
ỤLỌ NCHE Ọgwụgwụ Ụwa Ọ̀ Dịla Nso?